मनसुन सौन्दर्यः कपालको चायाँ हटाउने काइदा
मनसुनमा शरीरबाट तेल र पसिना निस्कने हुँदा कपालमा चाया पर्ने समस्या देखापर्छ । गर्मी मौसममा टाउकोको छाला तैलिय भए पनि कपाल चाहि सुख्खा र रुखो नै भैरहन्छ । टाउकोको छालामा रोमछिद्र बन्द भएका कारण यो समस्या पैदा हुन्छ । यसले टाउकोबाट निस्कने प्राकृतिक तेलको बाँडफाडमा नै समस्या पैदा गर्छ ।
तपाईंको टाउकोको छालामै यदि चाया टाँसिएको भने त्यसका लागि हट आयल थेरापी उपयुक्त हुन्छ । यो थेरापीका लागि तिल अथवा जैतुनको तेललाई तताएर कपासले हल्का रगड्दै टाउकोको छालामा लगाउनुपर्छ । त्यसपछि तातोपानीमा तौलिया भिजाएर निचोरेपछि टाउकोमा बेर्नु पर्छ ।
करिव ५ मिनेटसम्म तौलियामा टाउकोमै राखेपछि पुनः तातोपानीमा तौलिया भिजाएर निचोरेपछि टाउकोमा बेर्नु पर्छ । यो प्रकृयालाई तीन-चार पटक सम्म जारी राख्नु पर्छ । यसबाट कपाल र टाउकोको छालाले राम्रोसँग तेल सोस्छ ।
तेल लगाइएको कपाल एक रातसम्म नपखाली त्यसै छोड्नुपर्छ । बिहान उठेर टाउकोको छालामा कागतीको रस लगाएर २० मिनेटपछि कपाल पखाल्नु पर्छ । यसो गर्नु भयो भने तपाईंले टाउकोको छालामा टाँसिएर बसेको चायाबाट छुटकारा पाउन सक्नु हुनेछ ।
कमालमा नियमित स्याम्पु
मनसुनको सिजनमा कपालमा केही समयको अन्तरालमा स्याम्पु गरिरहनु पर्छ । तपाईंको कपाल तैलिय छ भने त दिनका दिन स्याम्पु गर्दा पनि फरक पर्दैन । यसका लागि हामीले कपालमा माइल्ड हर्बल स्याम्पु प्रयोग गर्न सक्छौं । सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने कपालमा स्याम्पो गरिसकेपछि राम्ररी धुनु पर्छ ।
मनसुनमा हरेक साता आफ्नो कपालमा मेहन्दी लगाएर पनि कपाललाई स्वस्थ तथा आकर्षक बनाउन सकिन्छ भने चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । मेहन्दीमा केही चम्चा कागतीको रस, त्यत्तिकै मात्रामा कफि पाउडर, दुई वटा अण्डा, एउटा सानो चम्चा मेथी पाउडरमा चियापत्ति मिसाएर गाढा पेस्ट बनाउनु पर्छ । त्यसपछि उक्त पेस्टलाई कपालमा लगाउनु पर्छ ।
करिव एक घण्टापछि कपाल धुनु पर्छ । यदि मेहन्दीमा अण्डा समेत प्रयोग गर्न चाहानु हुन्छ भने चियापत्तिको मात्रा बढाउन सक्नु हुनेछ । यसबाट कपाललाई चायामुक्त राख्न सहयोग मिल्छ ।
एसेन्सियल आयलको प्रयोग
बजारमा एसेन्सियल आयल पाइन्छ । यसको प्रयोगले पनि मनसुनमा टाउकोमा भएको चायाबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यसका लागि ५० मिलिमिटर गुलावजलमा रोजमेरी एसेन्सियल ओयलको पाँच थोपा मिसाउनु पर्छ ।
त्यसरी मिसाएको मिश्रणलाई एउटा सानो बोतलमा बिर्को लगाएर राख्नु पर्छ । कपालमा स्याम्पु लगाएपछि यो तेललाई टाउकोको छालासम्म पुग्ने गरी दल्नु पर्छ । तेल लगाएको केही समयपछि राम्ररी पखाल्नु पर्छ ।
टाउकोको छालाको स्वास्थ
टाउकोको छालामै चाया पर्ने भएकाले यसलाई स्वस्थ राख्नु पर्छ । त्यसका लागि दुई मुठी नीमको पातलाई चार ग्लास तातोपानीमा भिजाएर रातभरी राख्नु पर्छ । बिहान त्यही पानीले कपाल धुन थालियो भने टाउकोको छाला चाया मुक्त हुन्छ भने टाउको चिलाउने समस्यामा पनि कमि आउँछ । यसले टाउकोको छालालाई पनि स्वस्थ र संक्रमणरहित बनाउँछ ।
यसका साथै नीमको पातलाई पिसेर टाउकोको छालामा लगाएर आधा घण्टापछि धुने गरियो भने पनि चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
बजारमा पाइने कन्डिसनरको साटो चियापत्ति र कागतीबाट बनाइएको झोलले कपालका लागि राम्रँे कन्डिसनरको काम गर्न सक्छन् । त्यसका लागि चियापत्तिलाई अलि धेरै बेरसम्म उमालेर चिसोभएपछि त्यसमा कागतीको रस मिसाउनु पर्छ । स्याम्पु लगाएपछि उक्त मिश्रणलाई कपालमा लगाएर पखाल्नु पर्छ । यसले गर्मी मौसममा कपालबाट पसिना आएर हुने चिपचिपाहतबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
नवलपरासीको राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा जीवन ज्योति मावि पहिलो
२५ असार, नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीको यस वर्षको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा जीवन ज्योति मावि प्रथम भएको छ । सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनसम्म गैडाकोटको जनक माविमा चलेको प्रतियोगितामा जीवन ज्योति ८ स्वर्ण, एक रजत र दुई कास्य पदकसहित प्रथम भएको हो ।
त्यसैगरी मणिसंगम मावि डाँडाजोरले ३ स्वर्ण, ६ रजत र १ कास्य पदक सहित द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ भने ३ स्वर्ण, २ रजत पदक सहित जनता मावि त्रिभुवनटार तृतीय भएको छ ।
प्रतियोगिताको समापन कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले विजयी खेलाडी तथा विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार, शिल्ड, प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
हारले इंग्ल्यान्डलाई झनै बलियो बनायो- प्लुंकेट
२५ असार, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटमा हारले इंग्ल्यान्डलाई झनै बलियो बनाएको टिमका महत्वपूर्ण सदस्य लियाम प्लुंकेटले बताएका छन् ।
लिग चरणको खेलमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तान, श्रीलंका र अष्ट्रेलियासँग हार ब्यहोरेको थियो । तर भारत, अफगानिस्तान, दक्षिण अफि्रका, वेष्ट इन्डिज, बंगलादेश र न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै आयोजक इंग्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्‍यो । अब सेमिफाइनलमा फाइनल प्रवेशका लागि अष्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
अष्ट्रेलियाविरुद्धको सेमिफाइनल अघि इंग्ल्यान्ड टिमका सदस्य प्लुंकेटले आफ्नो टिम हारले झनै बलियो बनेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ की हारले हामीलाई अझ बलियो बनाएको छ । हामीले केही खराब खेल खेल्यौं र हामीले जसरी खेल्थ्यौं यसरी खेल्न सकेनौं । तर मेरो विचारमा यो कमजोरीलाई हामीले सही समयमा पहिचान गर्‍यौं । अब हामी आफ्नो वास्तविक क्रिकेट खेल्नेछौं र अझै सुधार गर्नेछौं ।’
उनले आफ्नो टिमले विश्वकपको सुरुवातमा गरेको प्रदर्शन जसरी नै सेमिफाइनलमा खेल्ने बताएका छन् । इंग्ल्यान्डले पछिल्लो चार वर्षमा एकदिवसीय क्रिकेटमा एकदमै राम्रो खेलेको छ ।
काठमाडौंलाई कस्तो शहर बनाउने ? प्राचीन कि आधुनिक ?
पिटरले इंग्ल्यान्डविरुद्ध सेमिफाइनलमा खेल्ने
२५ असार, काठमाडौं । पिटर हृयान्ड्सकोम्बले विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध खेल्ने भएका छन् ।
अष्ट्रेलियाका मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन लेंगरले पिटरले सेमिफाइनलमा खेल्ने पक्का भएको बताएका छन् । उनी यसै साता साउन मार्सको स्थानमा टिममा परेका हुन् । मार्स अभ्यासको दौरानमा घाइते भएपछि विश्वकपका लागि अष्ट्रेलियाले टिममा उनलाई स्थान दिएको हो ।
आयोजक राष्ट्र इंग्ल्यान्डविरुद्ध अष्ट्रेलियाले बिहीबार सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यो खेलमा पिटरले खेल्ने निश्चित भएको मुख्य प्रशिक्षक लेंगरले बताएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘म तपाईंहरुलाई साचो भन्छु । पिटरले निश्चित रुपमा खेल्ने छन् । उनले खेल्ने १०० प्रतिशत साचो हो ।’
प्रशिक्षक लेंगरले थपेका छन्, ‘उनी राम्रा खेलाडी हुन् । अष्ट्रेलियाका लागि उनले राम्रो खेलेका छन् । उनले मिडिल अर्डरमा राम्रो गर्नेछन् ।’
भारत र न्युजिल्यान्डको बाँकी खेल आज
By नेपाली कान्छा on 6:17 PM | nepal news, samachar, नेपाल खबर | No comments
२४ असार, काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा न्युजिल्यान्ड र भारतबीच बाँकी खेल आज हुँदैछ । इंग्ल्यान्डको म्यान्चेस्टरमा भारत र न्युजिल्यान्डबीच मंगलबार खेल चलिरहँदा वर्षा भएपछि रोकिएको थियो । ‘डिजर्ब डे’ अनुसार आज बाँकी खेल हुन लागेको हो ।
न्युजिल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै ४६.१ ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा २११ रन बनाउँदा पानी परेको थियो । लगातार पानी परेपछि यो खेल ‘डिजर्ब डे’ को लागि सारिएको थियो ।
खराब सुरुवात गरेको न्युजिल्यान्डका लागि कप्तान केन विलियम्सनले ६७ रन बनाउँदै टिमलाई उकासेका थिए । उनले हेनरी निकोलससँग ६८ रनको साझेदारी गरे । निकोलस भने २८ रनमा आउट भए ।
न्युजिल्यान्डका लागि क्रिजमा रोस टायलर ६७ रन बनाएर अविजित छन् । न्युजिल्यान्डले आज ४६.१ ओभरमा पाँच विकेटको क्षतिमा २११ रनदेखि नै ब्याटिङ थाल्नेछ ।
दुवै टिम जित हात पार्दै फाइनलमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा छन् । आजको विजेताले फाइनलमा उपाधिका लागि अर्को सेमिफाइनल विजेता अष्ट्रेलिया वा आयोजक इंग्ल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस विश्वकप सेमिफाइनल : भारत कि न्युजिल्यान्ड ?